Hong Kong : Lahatsary Telo Manazava Ny Antony Mampizara Ny Fijerin’ny Olona Momba Ilay Volavolam-Panitsiana Fifidianana Avy Amin’ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Aogositra 2015 15:18 GMT
Dikasary avy amin'ny lahatsary Youtube : ‘Taratasy ho an'i Hong Kong 2020′.
(Fanamarihana: nivoaka tamin'ny 14 Jona ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Hanolotra volavolam-panitsiana ny fifidianana amin'ny Filànkevitry ny mpanao lalàna ny governemantan'i Hong Kong amin'ny 17 Jona, mialoha ny fifidianana izay ho Filoha Mpanatanteraka — toeran'ny mpitarika ambony any amin'ny nosy — amin'ny 2017.
Ireo mpanao lalàna Pan-demokraty no andrasana hitsipaka ilay volavolam-panitsiana satria ny rafitra napetraky ny Kongresy nasionalin'ny vahoaka (NPC), komity maharitry ny fanaovan-dalàna any amin'ny tanibe Shina no arahany.
Araka ny lalàna dia mitaky ny fanohanan'ny roa ampahatelon'ireo mpanao lalàna amin'ireo fari-piadidim-pifidianana mivantana sy ny fari-piadidiana araka asa ao amin'ny Parlemanta ny fanovàna ny rafitra ara-politika rehetra ao amin'ny nosy.
Manana ny vato ampy hitsipahana ilay volavolam-panitsiana ny Pan-demokraty satria azy ireo ny ampahatelon'ny seza amin'ny fari-piadidiam-pifidianana mivantana.
Takian'ilay rafitra NPC nambara tamin'ny 31 Aogositra 2014 fa mahazo ny fanohanan'ny maro an'isa avy amin'ny Komitim-pifidianana (EC) amin'izao fotoana izao sy tokony eken'ny Komity Mpanendry (NC), fikambanana anjakan'ireo mpikambana mpomba an'i Beijing, izay rehetra mpilatsaka ho fidiana ho eo amin'ny toeran'ny Filohan'ny Mpanatanteraka. Mampihena ny isa ara-drarin'ireo mpilatsaka ho fidiana ho roa na telo ihany koa izany.
Ny lalaon'i Shina
Fanitsakitsahana ny fitsipika ‘ Firenena iray Rafitra roa’ heverina ho fanalahidy miantoka ny fizakantenan'i Hong Kong no fahitan'ny pan-demokraty ilay sarintsarinà fanelanelanana ataon'i Beijin amin'ny dingam-pifidianana any Hong Kong .
Ny Lehiben'ny Mpanatanteraka amin'izao fotoana izao dia ireo 1.200 matanjaky ny EC no nifidy azy tamin'ny vato 150, isam-bato fanohanana ilaina tratrarina, raha toa ka vato fanohanana 600 avy amin'ny NC no takian'ilay volavolan-dalàna avy amin'ny governemanta mialoha ny ahazoan'ilay mpilatsaka alàlana hihazakazaka ho fidiana amin'ny fifidianana. Amin'ny endriky ny mpanao lalàna amin'izao fotoana izao, dia antoka no omen'ilay tolo-drafitra fa ireo mpifaninana mpomba an'i Beijin ihany, tahàka ny Lehiben'ny Mpanatanteraka amin'izao fotoana izao, Leung Chun-ying, no ho azo fidiana.
Ampitahain'ity lahatsary manaraka novokarinà vondrona olom-pirenena tsy miankina ity ireo rafitra roa no sady manasa ireo mpijery izy mba hitsara raha toa ka mandroso na mihemotra ilay volavolam-panitsiana ny fifidianana.
Tamin'ny 10 Jona, nasehon'ny vokatry ny fakàna ny hevi-bahoaka fa betsaka kokoa ny nanohitra rah amitaha amin'ireo nanohana ilay volavolam-panitsiana naroson'ny fitondrana : 43 isanjaton'ny valiny no nanao tsia tamin'ilay fanitsiana ny fifidianana, raha 41,7 isanjato no nanao eny. Niaraka natao tamin'ny an'ireo oniversite telo lehibe tamin'ny faran'ny Aprily, taorian'ny nanambaran'ny governemanta ny antsipirihan'ny volavolam-panitsiany, ilay fakàna ny hevi-bahoaka.
Nasehon'ireo fanadihadiana tany aloha fa ny ankamaron'ireo valinteny dia nanohana ilay volavolam-panitsiana natolotry ny fanjakana, satria tamin'ny ankapobeny dia nandà tsy hanaisotra ny fanapahan-keviny tamin'ny 31 Aogositra ny governemanta Shinoa no sady nohamafisiny fa nofinofy ilay fiheverana fanendrena taon'olon-tsotra natolotry ny demokraty any Hong Kong.
Nitranga ny fiovàn'ny hevitry ny vahoaka satria ny fanapahan-kevitry ny governemanta hanolotra ilay volavolam-panitsiana tsy asiana adihevitra, toy ny fanafoanana ao amin'ny Antenimiera ilay fifidianana ataom-bondrona, fomba tsy lanin'ny vavonin'ny olona .
Ankoatra izany, dia nandà tsy nanome fandaharam-potoana mba hanolorana ilay fanitsiana ny fifidianana i Beijing, midika izany fa mety ho io volavolam-panitsiana io no ho lalàm-pifidianana maharitra any Hong Kong raha vao lany.
Henatra ho an'ireo mpiasam-panjakana izay nandresy lahatra ireo Pan-Demaokraty mpanao lalàna mba hifidy ny “araka izay irian'ny vahoaka” io fiovana toe-po io. Ary koa, taratry ny tsy fahombiazan'ny fanentanana izay nahitana ireo andianà doka politika avo lenta sy ny fitsidihana vondrom-piarahamonina nisongadinann'ireo mpiasam-panjakana ambony nanomboka tamin'ny Aprily lasa teo.
‘2017 – Make it Happen’ na “2017- Avelao ho avy” no teny filamatry ny governemanta. Ny doka tena nalefa betsaka ho ho an'ny daholobe dia manomboka amin'ny fanipihana ny hetahetan'ireo olom-pirenena tsotra mba hisian'ny fifidianana andrasan'ny rehetra anjara ary mifarana amin'ny antson'ireo mpiasam-panjakana ambony –Carrie Lam, Rimsky Yuen sy Raymond Tam (fantatra amin'ny hoe Izy Telo ) — ataony amin'ny vahoaka mba hanohana ny fanovàna.
Nalefa matetika tamin'ny Hong Kong TV nandritra ny volana vitsivitsy lasa iny izany :
Toy izao ireo fanehoan-kevitra miavaka tao amin'ny YouTube :
Manandrana manova ireo mpifidy 5 tapitrisa ho fitomboka io volavolam-panitsiana io.
Tsy azo ekena tsotra izao izany.
Mamadika ny vahoaka HK ianareo mpiasam-panjakana HK rehetra!!! tsy misaina ny handoa vola ianareo, tsy mahatsapa tena ho diso ianareo, mitàna ny pasipaoro vahiny anananareo ianareo…..manosika an'i HK ho any amin'ny helo… indray andro any tsy maintsy ho avy aminareo ny ‘karma’, ianareo sy ny fianakavianareo.
i George Orwell no tokony hirehareha aminareo. Mihomehy fotsiny ny hafa rehetra manerana izao tontolo izao.
Aparitaky ny mpisera amin'ny aterineto any Hong Kong ny dika vilan'ilay lahatsary atao hoe ‘2017 – Ataovy Tampin-dàlan-kaleha‘ izay ilalaovan'ireo mpilalao maka ny toeran-dry Izy Telo ny fampatsiahivana fa namadika ny vahoakan'i Hong Kong noho ny tombontsoa amin'ny asany ry zareo. Lahatsary iray matihanina kokoa, izay mampiharihary toetra tahàka ny an'i Carrie Lam, Sekretera Jeneraly ao amin'ny governemantan'i Hong Kong, nanoratra ‘taratasy ho an'i Hong Kong’ tamin'ny 2022, nitantara ny fanovàna rehetra izay nisy raha vantany vao nanan-kery ilay fanitsiana ny fifidianana.
Esoin'ilay lahatsary ho mpiatsaravelatsihy ilay Sekretera jeneraly, mpiasam-panjakana maharitra :
Inona no manaraka ?
Mampiseho ny tsy fahombiazan'ny governemantan'i Beijing amin'ny fanatanterahana ny andraikitra ara-politikany izay mamela ny vahoakan'i Hong Kong hanapa-kevitra ny amin'ny fanitsiana ny fitsipi-pifehezana ilay fanitsiana ny fifidianana.
Koa satria tsy nisy safidy hafa natolotry ny governemanta ankehitriny izay tarihin'i CY Leung ho drafi-panitsiana, dia avela ho an'ny Lehiben'ny mpanatanteraka izay ho voafidin'ny mpikambana 1.200 ao amin'ny CE amin'ny 2017 ny volavolam-panitsiana ara-politika manaraka.
Mialoha izany anefa dia hisy fifidianana filànkevitra amin'ny 2016 ary efa manomboka manentana ireo vahoaka tsy hifidy ireo mpanao lalàna avy amin'ny Pan-demokraty sahady ireo antoko politika mpomba an'i Beijing raha toa ka miantso ireo mpanohana hanampy azy ireo kosa ny pan-demokraty ho amin'ny fitazonana ny fahefana tsy azo ivalozana anànany ao amin'ny Parlemanta.
Hetsi-panoherana nokarakarain'olontstra ny Bodoy ny Afovoany mba ho andrana hanerena ny governemantan'i Beijing hisintona ilay drafitra 31 Aogositra sy hanome toerana betsaka kokoa ny fandraisan'ny olom-pirenena anjara amin'ny fanendrena ny Lehiben'ny Mpanatanteraka. Mitohy ny tolony.